‘निर्देशकले राति बोलाउँथे’ – Sourya Online
‘निर्देशकले राति बोलाउँथे’
सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ७ गते ०:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौं : एक दशकअघि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र बिहानीले उस्तो चर्चा कमाउन सकेन । तर, त्यसमा अभिनय गरेकी एक सुन्दरी थुप्रैको मनमा गडिएर बसिन् । यिनका रूप र यौवनले धेरैलाई आकर्षित पार्‍यो । उनी हुन्, टिना रजक । सो चलचित्रमा अभिनय गर्नुपहिले पनि उनले मोडल एवं कामुक डान्सरको छवि भने बनाइसकेकी थिइन् । यो चलचित्रको अभिनयले उनको छविलाई थप उजिल्यायो । निर्मातानिर्देशक उनका पछि लाग्न थाले । यो कुरा उनी पनि स्विकार्छिन् ।
तर, यत्तिका चर्चा कमाएकी यी सुन्दरी पछिल्लो समय कहाँ हराएकी त ? अरू चलचित्रमा किन नदेखिएकी ? निर्माता–निर्देशकको शैली चित्त नबुझेका कारण चलचित्रबाट टाढिएको उनी सुनाउँछिन् । उनका अनुसार चलचित्रमा अफर गर्ने बहानामा निर्माता–निर्देशकले उनलाई आधा रातमा बोलाउन थाले । कतिले एक कप कफी खाने भन्दै नगरकोट धुलिखेलसम्म जाने प्रस्ताव गर्न थाले । भनिन्– ‘त्यस्ता घटिया व्यक्तिहरूका कारण नायिका बन्ने रहर भित्रबाटै मरेर गयो । त्यस्ता गलत सम्झौता गरेर टिक्न चाहेको यतिखेर टप हिरोइन भइसक्थेँ होला । तर, मलाई त्यसो गर्नुभन्दा विदेशका स्टेज प्रोग्राम गर्नुमै सन्तुष्टि मिल्यो ।’
पुराना गायक प्रकाश श्रेष्ठदेखि सोनु निगम, सिन्धु मल्ल, सुदीप गिरी, सुरज बर्डसम्मका गीतका भिडियोमा मादक अभिनय गरेर सबैको मन जित्न सफल भइन् उनी । त्यो जोस र मादकता आफूमा अझै रहेको दाबी गर्छिन् टिना । नायिका बन्ने धोको अझै सेलाएको छैन । त्यसैले अब आफैँ चलचित्र निर्माण गर्ने सोचाइ उनले बनाएकी छन् । टिएन ट्राभल्स एन्ड टुर्स खोलेर पर्यटन व्यवसायमा पनि हात हालेकी छन् । ग्ल्यामरका नाममा नायिकाहरूले नग्नता पस्किने चलन बढेको अहिलेको अवस्थामा टिनाचाहिँ कस्तो बाटो रोज्लिन् त ? भन्छिन्– ‘आफूभित्रको अदामार्फत ग्ल्यामर झल्काउनेछु । हाउभाउबाट आफूलाई एक्सपोज गर्नेछु । अहिलेका नायिकाहरूले जस्तो भल्गारिटी प्रस्तुत गर्दिनँ ।’ (सौस)